Side Ties Manufacturers na Suppliers | China Side Ties Factory
Side tie e mepụtara ka e meere-eduzi ya aka n'akụkụ nke uzo nke poselin insulator.
Waya kpụrụ insulator n'akụkụ agbatị na-mere nke aluminum kpuchie ígwè, aluminum, galvanized ígwè ihe. Ihe nke heli agbatị na-adabere na ihe onwunwe ụdị-eduzi ya aka etinyere na, ACCC ma ọ bụ ACSR. Galvanized ígwè n'akụkụ agbatị na-adịkarịghị eji, tụnyere aluminum n'akụkụ agbatị.
Ọzọkwa onwem na rịbọn rube. Na-enye elu nketa na ọkụ arụmọrụ na kacha mma mkpuchi e ji mara nke etinyere ngalaba.
Side tie na-eji maka ọtọ efe n'elu bundled eduzi na MV na HV ike nnyefe netwọk. Ha na-bu n'obi ibu akara akụkụ karịa n'elu uzo style agbatị.
The pụrụ iche, onye-ibe imewe enweghị ihe ọ bụla bolts ọ bụ elu-nrụgide na-ejide ngwaọrụ ekwe nkwa mfe echichi na ogologo ndụ oge nke preformed insulator agbatị.
Jera bụ ike ịzụlite preformed Ihọd-grips na preformed n'akụkụ agbatị dị ka gị cable nkọwapụta, insulator n'olu dayameta na anya n'etiti okporo osisi ya.